Semalt Inogovera Zvimwe Zvepurogiramu Yakashata Unofanira Kuziva Nezve
Purogiramu yakatsvaga inotsvaga zvinyorwa kana zvigadzirwa kubva pamapeji ewebhu akasiyana. Inogona kuverenga magwaro e HTML, mafaira epa PDF, uye kunyora zvinyorwa zviri nyore uye zvinoparadza ruzivo rwakakosha uye rune chinangwa maererano nezvatinoda. Vashandisi vanoshandisa mapurogiramu epamusoro kuita mabasa akasiyana-siyana. Vanonyanya kutsvaga mawebsite ane simba uye masayenzi ezvehuwandu hwevanhu kuti vawane ruzivo rwakakosha uye vushandure ruvo rwakaverengwa. Kune mazana ezviuru zvezvikwata zvekuchera paInternet, uye dzose dzazvo dzakasiyana nezvimwe zvinhu uye zvinhu.
Pano takakurukura zvinhu zvinoshamisa zvinoshandiswa pakurongwa kwako - project report on hr management system.
1. Bvisa dambudziko mumitambo yakasiyana-siyana:
Iva nechokwadi chokuti chirongwa chaunosarudza chinogona kubvisa ruzivo rwakasiyana-siyana uye runogona kuita mabasa akawanda panguva imwe chete. Tumira. Io naKimono Labs mapiyona maviri ayo anoshandiswa kukamba mapepa ewebhu uye kukohwa data. Vanomhanya tambo dzakasiyana-siyana uye vanoita kuti mushumo wenyu hwekutsvaga huve usina kunaka. Iwe unogona kuongorora data kubva pamapapu makumi mapfumbamwe ewebhu uye uchengetedze nguva yako nesimba. Kana purogiramu yako ichiita kuti hushande hunobudirira, unogona kusarudza iyo kuti iparadze data inoda.
2. Takura mapeji epakombiyuta nokukurumidza:
Icho chimwe chezvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa purogiramu yako yezvokudya inofanira kuva. Kana iyo inotakura mapeji ako ewebhu pajaikurumidza, iwe unofanirwa kusarudza iyo pakarepo. ParseHub ibasa rekuchera rinobatsira rinotora ruzivo kubva kune zvakasiyana-siyana uye rinogadzira migumisiro yakanaka yevashandi vayo. Inogadzirawo zvikumbiro zvakadai seAJAX uye inoita kuti basa rako rive nyore. Purogiramu yakadaro inobatsira kumabhizimisi uye mapurogiramu. Iwe unogona kubvisa zvinyorwa kubva pamagwaro akasiyana e-HTML nemafuta epa PDF, uyewo zvinotarisa mifananidzo yakawanda uye mavhidhiyo evhidhiyo.
3. Gamuchira ruzivo kubva kumagariro evanhu:
Zviri nyore kuunganidza nekutsvaga zvinyorwa kubva kunzvimbo dzinoshandiswa, mabhizimisi emashoko, uye nzvimbo dzekufambisa. Asi kana purogiramu yako yakakosha inogona kuwana uye kubudisa ruzivo kubva pa Facebook, LinkedIn uye Twitter, unofanira kuedza. Easy Web Extract is an scraper ine simba iyo inobvumira vashandi vevashandi kuti vadzidze ruzivo kubva kumagetsi evanoshamwaridzana nevanhu uye nyore nyore. Inogonawo kushandura zvakasiyana-siyana zvekuMexico uye zvinyorwa zvinonzwisisika kubva ku LinkedIn kune vashandisi vayo.
4. Automates Projects Nguva ipi zvayo:
Chirongwa chakanaka chechirongwa chinogadzira mapurogiramu evashandisi varo uye inochengetedza nguva yavo nesimba. Octoparse isarudzo inoshamisa yevashanduri uye mabhizinesi. Iwe unogona kuronga mapurojekiti ako ekudhonza deta kana kurega iyi yese yese inoita web scrap ing mabasa pachayo. Iyo inowirirana nechokuita zvose web browser browsers uye maitiro anoshandisa kusanganisira Windows, Linux, uye Mac.
5. Shandisa Dhidhiyo kuIpi zvayo:
NeIWebTool Link Extractor uye Link Extractor, haugoni kubudisa deta yaunoda chete asi zvakare kuitumira kune yako yaunoda. Inonyanya kutsigira CSV, XML, Access, HTML, SQL Server uye MySQL uye inokupa mhinduro yakarurama uye yakavimbika. Tinogonawo kugovera mhinduro kune chero marudzi eDaibha kuenda kunotungamirirwa neODBC. Inokodzera mabhizimisi maduku uye mashepiti uye inoparadza nhamba huru yemapeji ewebhu panguva imwe chete.